बच्चाका लागि बढी क्याल्सियम पाउने खाद्यपदार्थ के हुन्? थाहापाउनुहोस् ! « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
बच्चाका लागि बढी क्याल्सियम पाउने खाद्यपदार्थ के हुन्? थाहापाउनुहोस् !
२ बैशाख २०७९, शुक्रबार ००:००
हाम्रो शरीर विकासको लागि सन्तुलित भोजन आवश्यकता पर्छ । यदी हाम्रो शरिमा कुनै पनि पौष्टिक तत्वको कमि हुन गयो भने हाम्रो शरीरमा अनेकौ समस्या सृजना हुने गर्छ ।
त्यसकारण हाम्रो शरिरको लागि पौष्टिक तत्वपूर्ण खाना खान एकदमै आवश्यक रहेको छ । सन्तुलित भोजन सबै उमेरका मानिसलाई आवश्यक पर्ने गर्छ तर विशेष गरी बालबालिकालाई बढी हुने गर्छ ।
बालबालिकाको विकास निकै तीव्र गतिमा हुन्छ। त्यसैले वयस्कको तुलनामा उनीहरुको शरीरको आवश्यकता पनि धेरै नै हुन्छ। उनीहरुले बढी पोषक तत्व सेवन गर्नु आवश्यक हुन्छ।
उचाई, तौल र उमेरको हिसाबले सन्तुलित आहारा सेवन गर्नुपर्छ। यस्तोमा बच्चाको विकासका लागि क्याल्सियमको सेवन निकै आवश्यक हुन्छ। क्याल्सियमले बच्चाको हड्डीलाई स्वस्थ र मजबूत राख्नुका साथै दाँतको मजबुतीमा पनि ठूलो भूमिका निर्वाह गर्छ।
आज हामी तपाईलाई क्या बच्चाका लागि आवश्यक क्याल्सियमले भरपुर खानाहरुका बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौं ।
१. सुन्तलाको जुस
२. दुग्धजन्य पदार्थ
यसका अलावा बच्चालाई क्याल्सियमयुक्त खाद्यपदार्थहरु बदाम, ओखर, दाल पनि खुवाउन सकिन्छ, जो इनर्जी तथा इम्युनिटी बुस्टर पनि हुन्। स्वास्थ्य खबर
प्रकाशित मिति: Apr 15, 2022
एक वयस्क मानिसलाई दिनमा १५ सय क्यालोरी शक्ति चाहिन्छ । यदि १३ सय क्यालोरी भन्दा
सरकारले बढायो दूधको मूल्य, लिटरको कति पुग्यो ?
सरकारले दूधको मुल्य बढाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार साँझ बसेको बैठकले किसानका लागि दूधको समर्थन
चिसो मौसममा तातो पानी पिउनुका यस्ता छन् फाइदा!
अहिले देशभर नै चिसो बढीरहेको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले आफ्नो स्वास्थ्यको सुरक्षाको लागि विशेष
मुटुदेखि किडनीलाई स्वस्थ राख्ने एभोकाडोका जान्नुहोस् फाइदा र बफाइदाहरु!
एभोकाडो (Avocado) लाई नेपालीमा घिउ फल (Butter Fruit) भनिन्छ । मध्ये अमेरिका र मेक्सिको मा
थाहापाउनुहोस् : सिधे नुन खादाँ हुन्छन् यस्ता फाइदा !
सिधे नुन कमै मानिसले खाने गर्छन् र यसको फाइदा पनि कमैलाई मात्रा थाहा होला। हामीले